Wasiirkii arrimaha gudaha & amniga ee dawlada federaalka oo qarax lagu dilay; Al-shabaab oo sheegtay qaraxaasi. – Radio Daljir
Juunyo 11, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, June 10 – Allaha u naxariistee waxaa caawa (Jimce) ku geeriyooday magaalada Muqdisho wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda federaalka ah C/shakuur Sh. Xasan Faarax oo galabta ku dhaawacmay qarax is miidaamin ah oo lagu qaaday gurigiisa; qof dumar ah oo la sheegay in ay ka mid ahayd ehelada wasiirka ayaa la sheegay in ay gaysatay dilka marxuumka.
Wasiirka oo qaba dhaawacaasi halista ah ayaa loola cararay cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho halkaas oo uu wax yar kadibi ku geeriyooday.
Afhayeen u hadlay ururka Al-shabaab ayaa sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxaasi lagu dilay wasiirka.
Qaraxa kadib waxaa guriga wasiirka isku gadaamay ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom, waxaana halkaasi laga soo ururiyey xubnaha jirka ee haweeneydii is qarxisay oo aad u googo?day; waxaana ay dawladdu ku tilmaantay qaraxan mid arxan darro ah, ayna si kulul u cambaaraynayaan.
Wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dawladda ayaa horay loogu dilay qaraxyo is-miidaamin ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen qaraxyadii ka dhacay hotelka Shamow ee magaalada Muqdisho iyo magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan.
“Tallaabooyin muuqda ayaa ka hirgalay qorshayaashii lagu hagaajinayey bilicda magaalada; Duqa Garoowe.
Diidmada is-casilaadda R/wasaare Farmaajo oo sii kordhaysa iyo ciidanka millateriga federaalka oo ku goodiyey Af-ganbi.